AKHRISO: Sidee Xalay loogu Kala Guuleystay Abaalmarinada FIFA ee The Best Iyo Codadka Ay Kala Heleyn Musharaxiinta – Bandhiga
AKHRISO: Sidee Xalay loogu Kala Guuleystay Abaalmarinada FIFA ee The Best Iyo Codadka Ay Kala Heleyn Musharaxiinta
Waxa xalay la bixiyay abaalmarinada FIFA ay bixiso ee THE BEST abaalmarinadaasi oo la siiyo shaqsiyaadka Raga iyo Dumarka ee ugu fiican aduunka qeybahoda kala duwan.
Xaflad si qurux badan loo soo agaasimay oo ka dhacday magalada Milan ee dalka Talyaniga aya waxa xalkaasi dhoola cadeynn kala baxay qaar ka mid ah musharaxiinta.
Waxa xalay xaflada laga waayay xidiga Portugal iyo kooxda Juventus Cristiano Ronaldo kaaso markii labad oo xiriir ah ka baaqsaday xaflada marka lagu daro xafladii London ee Mudric lagu caleema saaray.
HADABA SIDE LOO KALA GULEYSTAY.
Laacibka ugu fiican aduunka dhanka raga waxa hantay Leo Messi oo ka mid aha musharaxiinta,isago keensaday 46 cod,halka dafaca Liverpool Van Dijk uu helay 36 cod Cristiano Ronaldo aya codeynta sedexaad ka galay waxana uu keensaday 32 cod.
Jurgen Klopp oo hogaamiya Liverpool aya hantay macalinka sanadka ugu fiican ka dib uu xili ciyaareed cajiib ah ku hogaamiyay Liverpool waxana uu kaga sara maray 48 dhibcod Pep Guardiola oo helay 38 dhibcod iyo Mauricio Pochettino oo helay 27 dhibcood.
Abaalmarinta gool hayaha ugu fiican aya waxa hantay shabq ilaaliyaha Liverpool Alisson Becker kaaso xili ciyaared cajiib ah ku dhafay musharaxiinta kale ee Stergen iyo Aderson oo City iyo Barcelona u cayara.
Macalinka ugu fiican dhanka Dumarka waxa hanatay macalimada xulka USA jillian Anne Ellis iyado ku garaacday Phil Nevil oo Enland gabdhada hor kacayay iyo macalimada Nederland.
Gabadha ugu fiican gabdhaha cayaara kubada cagta sanadka waxa loo caleema saray gabadha USA ku hogaamisay hanashada World Cupkii dhawan ka dhacay France Megan Rapinoe,waxay ku garacday Lucy Bronze oo u cayaarta hablaha England, Alex Morgan aya booska sedexaad ka soo gashay codenta dhacday.
Abaalmarinta goolka ugu quruxda badan aya waxa hantay Daniel Zsori kaso 18 jir ahkaso cayaara horyaalka Hungruy isago ku garacay musharaxiin ay ka mid yihiin Messi iyo Ibrahimoviuc.
Goolhayaha ugu fiican ee dhanka dumarka waxa hanatay gabadha xulka Holand ee gaaray kama danbeytsta koobka aduunka Sari van Veenendaal.
Xafladan aya ah mid sanad ah iyado madaxweynaha kubada cagta aduunka uu gaba gabadii sheegay hadal loo riyaaqay oo aha in uu si wey ula dhacay isbadalka ku yimi sanadka cayaraha dumarka isago bararajuyay hormarkoda marka loo qiimeyo dawashada ay helayan.
Waxa ugu cajiibsanaa ee la arkay lka dib abaalmarinadii xalay aya ah in xulka Portugal ay bogooda bulshada soo dhigeyn sawirkla Ronaldo oo la raacsiyay kii ugu fiicana abid,waxa loo arkaya difaacida xidigoodii xalay segay xaflada.